Huawei မှ Operating System အသစ်ဖြစ်သော Harmony OS အား မိတ်ဆက် - PX
Harmony OS မှ အသိဉာဏ်မြင့်မားသည့် အတွေ့အကြုံအား အမျိုးမျိုးသော သုံးစွဲသူများထံသို့ ပေးအပ်နိုင်မည်ဖြစ်
သြဂုတ်လ ၉ ရက် ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် – ယနေ့တွင် ကျင်းပသည့် Huawei Developer Conference ၌ Huawei သည် microkernel ပေါ်တွင် အခြေခံထားသည့် operating system အသစ်တစ်ခုအား မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ အဆိုပါ operating system သည် ထုတ်ကုန် နှင့် အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် ပြီးပြည့်စုံသော သုံးစွဲသူ အတွေ့အကြုံအား ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Consumer Business Group ၏ CEO ဖြစ်သည့် Richard Yu မှ ကုမ္ပဏီမှ ယခုကဲ့သို့ OS အသစ် ပြုလုပ်ရခြင်း နှင့် ပတ်သက်ပြီး “ကျွန်တော်တို့ဟာ အခုဆိုရင် ပြီးပြည့်စုံပြီး အသိဉာဏ်မြင့်မားတဲ့ ထုတ်ကုန်၊ အတွေ့အကြုံတွေကို လိုလားလျှက်ရှိတဲ့ ခေတ်မှာ နေနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အခုလိုမျိုး လိုအပ်ချက်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ပိုမိုအဆင့်မြင့်တဲ့ cross-platform လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပါဝင်တဲ့ operating system တစ်ခုကို ထုတ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်လာတယ်ဆိုတာ သိရှိလာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာမဆို ထုတ်ကုန် နဲ့ platform အမျိုးမျိုးမှာ သုံးဆွဲလို့ရပြီး သုံးစွဲသူတွေကို နှောင့်နှေးမှု အနည်းဆုံး နဲ့ ခိုင်မာတဲ့ လုံခြုံမှုတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့် OS တစ်ခုကို လိုအပ်လာပါတယ်။” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
OS – ထင်ရှားသည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက် ၄ မျိုး
၄. ပေါင်းစည်းခြင်း (Unified) – Multi-device IDE သည် app များအား တစ်ကြိမ်တည်း ဖန်တီးနိုင်စေမည်ဖြစ်ပြီး အခြားသော ထုတ်ကုန်များ၌ပါ အသုံးပြုနိုင်စေမည်ဖြစ်
ယနေ့တွင် ပြုလုပ်သွားသည့် Developer ညီလာခံတွင် Huawei သည် Harmony OS နှင့် ၎င်း၏ kernel တို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကြေညာသွားသည်။ HarmonyOS 1.0 သည် ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် မိတ်ဆက်သွားမည့် smart screen ထုတ်ကုန်များတွင် ပထမဦးစွာ ထည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ နောက် ၃ နှစ် ခန့်ကြာသည့်အခါတွင် HarmonyOS သည် အကောင်းဆုံးအနေအထားအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်ပြီး smart devices နှင့် wearables များ၊ HUAWEI Vision နှင့် ကားအတွင်းရှိ head unit များ ကဲ့သို့ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် ထုတ်ကုန်များတွင်ပါ အသုံးပြုနိုင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
OS သည် ဆန်းသစ်သည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများအား သုံးစွဲသူများ ၊ မိတ်ဖက်များ နှင့် developer များအတွက် သယ်ဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများအတွက် ၎င်းတို့၏ ဘဝများတွင် အသိဉာဏ်မြင့်မားသည့် အတွေ့အကြုံများအား သယ်ဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။ ကိရိယာများ ထောက်ပံ့နေသည့် မိတ်ဖက်များအတွက် 5G ၊ AI နှင့် IoT များ ကြီးထွားတိုးတက်လာသည့် ခေတ်တွင် အားသာချက်အားများ ကနဦး လက်ဦး ရရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် HarmonyOS သည် developer များအား နည်းပါးသည့် ရင်းနှီးမြှပ်နှုံံ့မှု ၊ မြန်ဆန်ပြီး တီထွင်ဆန်းသစ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် သုံးစွဲသူများအား ဆွဲဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Press Released by HUAWEI.
Huawei မှ ကိုယ်ပိုင် HarmonyOS ကို မိတ်ဆက်
Google Pixel4နဲ့ 4XL မှာပါဝင်လာနိုင်မယ့် 90Hz Display နဲ့ Rear Camera အချက်များ ပေါက်ကြား